မြွေပါ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် "Mongoose" ဟုခေါ်သော ကြောင်အသွင်ရှိ တိရစ္ဆာန်များအနွယ်ဝင် မြွေပါ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အခြား အသုံးအနှုန်းများ အတွက် မြွေပါ (သံတူကြောင်းကွဲ) ကို ကြည့်ပါ။
Temporal range: Miocene ခေတ်ဦး မှ လက်ရှိခေတ်
Top left: Meerkat
Top right: Yellow mongoose
Bottom left: Slender mongoose
Bottom right: Indian gray mongoose
en:Johann Karl Wilhelm Illiger, 1811
Rhinogalidae, Gray, 1869
Suricatinae, Thomas, 1882
Cynictidae, Cope, 1882
Suricatidae, Cope, 1882
Herpestoidei, Winge, 1895
Mongotidae, Pocock, 1920
မြွေပါ (အင်္ဂလိပ်: Mongoose) သည် ဗီဗာရီးဒီးမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်၍ ရုတ်တရက်ကြည့်က ရှဉ့်ကလေးများနှင့် သဏ္ဌာန်တူသည် ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ အမြီးသည် ရှဉ့်ထက် တိုသည့်ပြင် ကိုယ်နေကိုယ်ထားလည်း တစ်မျိုးစီဖြစ်၏။ ကိုယ်လုံး ၁၆ လက်မခန့်ရှည်၍ အရောင် ကား ပြာမှိုင်းမှိုင်း ညိုတိုတိုအရောင်ရှိပြီးလျှင် အမွေးရှည်သည်။ ပါးစောင်နှင့် လည်ပင်းတွင်မူ နီကြန်ကြန်အရောင် ရှိ၏။
မြွေပါသည် အလွန်စိတ်ခက်ထန်သော သတ္တဝါဖြစ်သော် လည်း ယဉ်အောင်သင်ရန် လွယ်ကူသည်။ မြွေပါကို အာရှ၊ အာဖရိကတို့တွင် များစွာ တွေ့ရ၏။ ဥရောပ တွင်မူ စပိန်၌သာ တွေ့ရသည်။ အိန္ဒိယ မြွေပါ မျိုးစိတ်ကို ပါဏဗေဒ အလိုအရ ဟာပတ်စတီးမန်ဂိုဟု ခေါ်၍ ယင်းတို့သည် အီဂျစ်ရှိ မြွေပါများထက် သေးသည်။
မြွေပါသည် ကြွက်၊ မြွေ စသော သတ္တဝါတို့ကို ကိုက်သတ်နိုင်သဖြင့် ထင်ရှား၏။ သို့ရာတွင် အဆိပ်ပြီး၍ကား မဟုတ်။ ထိုအဆိပ်ပြင်းသော သတ္တဝါများထက် လျင်မြန်မှုကြောင့် ဖြစ်၏။ သူတို့၏ ပါးနပ် လျင်မြန်ခြင်း၊ မျက်စိရှင်ခြင်း၊ အမွေးထူခြင်းတို့ကြောင့် မြွေများက ပေါက်သော်လည်း လွတ်အောင် ရှောင်တိမ်းနိုင်၍ မြွေ၏ ဇက်ပေါ်သို့ ခုန်တက် ကာ ကိုက်သတ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် မြွေပါသည် စိတ်ဆိုး သောအခါ အမွေးအမှင်များကို ပွယောင်းထောင်ကြွစေလျက် မာန်ဖီနိုင်သဖြင့် မြွေသည် မြွေပါကို ထိပါးရန် မလွယ်ကူချေ။
ထိုကြောင့် မြွေပါသည် မြွေပေါများသော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အရှေ့အိန္ဒိယကျွန်းစု စသည်တို့၌ မြွေဘေးကာကွယ်ရန် အထူးအသုံးဝင်သည်။ သို့ရာတွင် မြွေပါသည် မြွေကို သာမက အခြားကြက်ငှက်နှင့် ကြွက်များကိုလည်း ကိုက်သတ် ဖျက်ဆီးတတ်၏။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက ဗြိတိသျှပိုင် အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုရှိ ဂျမေးကားကျွန်းသို့ သွင်းယူမွေးမြူခဲ့ရာ လျင်မြန်စွာ ပေါက်ပွား၍ လူတို့ မွေးမြူထားသော ဘဲကြက်စသည်တို့ကို အရမ်းမဲ့ ဖျက်ဆီးကြသဖြင့် ယခုအခါ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုးသော သတ္တဝါဖြစ်နေလေသည်။ ထိုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မြွေပါကို မမွေးမြူကြရန်နှင့် ဥပဒေဖြင့် တားမြစ်ထားသည်။
↑ Wozencraft၊ W.C. (2005)။ "မျိုးရင်း (ဟာပက်စတီဒီး)"။ in Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 562–571။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
Fauna Europaea: 12643
Fauna Europaea (new): a51ea3ac-25b6-4dad-94b1-7da2519e9a21
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြွေပါ&oldid=719894" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။